Tag environment and investment - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » Tags » environment and investment
ဇူလိုင် 06, 2020 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ဇွန် 19, 2020 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ဇွန် 01, 2020 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ရေနံချောင်းဒေသခံများအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာများကို သိရှိနားလည်နိုင်စေရန် အသိပညာပေးခြင်း
မတ် 02, 2020 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အပြုဌာန (MCRB) အနေဖြင့် Green Future အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းပြီ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀၊ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရေနံချောင်းမြို့၌ ‘တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးနှင့်် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း’ ဆိုင်ရာ သင်တန်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ကျင်းခဲ့ပြီး တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းသားဦးရေပေါင်း ၃၅ ဝန်းကျင်ခန့်် ရှိပါသည်။ တက်ရောက်ခဲ့သာ သင်တန်းသားများမှာ ရေနံချောင်းမြို့မှ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမားများ အဖွဲ့အစည်းနှင့် တရုတ်၊မြန်မာ ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းသွားသော တစ်လျှောက်ရှိ ရေနံချောင်းမြို့၏ ကျေးရွာများမှ လာရောက်ကြသော ဒေသခံများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုသင်တန်းကို ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ ရွှေရေနံသာအခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းရုံးခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 09, 2020 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
စက်တင်ဘာ 06, 2019 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန(MCRB) နှင့် Scholar Institute တို့ပူးပေါင်း၍ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ဖြူမြို့၌ “တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ” ဆိုင်ရာ သင်တန်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
စက်တင်ဘာ 02, 2019 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
On 27 August, MCRB in cooperation with the Environmental Conservation Department of the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) heldaone day workshop for ministry staff involved in investment inavariety of sectors...
ဇွန် 10, 2019 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနနှင့် ဗားမောက်ဥပဒေကျောင်းတို့ ပူးပေါင်းပြီး အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေဆိုင်ရာ စည်းရုံးလှုံဆော်မှုသင်တန်း တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းကို အများ ပြည်သူ သိရှိနားလည်မှု အားကောင်းလာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဇန်နဝါရီ 02, 2019 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB worked with Vermont Law School (supported by Heinrich Boll Stiftung), in cooperation with the Environmental Conservation Department (ECD) of MONREC, and local civil society networks, to hold workshops in Mandalay, Monywa, Taunggyi and Loikaw.
MCRB မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စာတမ်းအနှစ်ချုပ်အား ထုတ်ပြန်ခြင်း
နိုဝင်ဘာ 06, 2018 in ရင်းမြစ်များ
MCRB has publishedabriefing paper intended to help business, civil society and government, particularly regulators, understand how some types of investment in Myanmar can negatively impact biodiversity and and thereby affect human rights.
နိုဝင်ဘာ 05, 2018 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းရှိ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို သိရှိနားလည်နိုင်စေရန် အသိပညာပေးခြင်း
အောက်တိုဘာ 15, 2018 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ဇွန်လတွင် အစပြုကျင်းပခဲ့သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် တောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း (ရှမ်း) နှင့် မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အတူ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထာက်အကူပြုဌာနတို့ ပူးပေ
ဇွန် 18, 2018 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
Hnin Wut Yee and Aung Kyaw Soe were speakers ataworkshop in Taunggyi for civil society organizations on “Responsible Business and the Role of Environmental Impact Assessment (EIA)” on 7/8 June...
ပလပ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုကို အကောင်းဆုံးတိုက်ဖျက်နိုင်ရန် သန့်မြန်မာ တွင် MCRB ပါဝင်မည်
မေ 21, 2018 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မြန်မာ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB)သည် လွန်ခဲ့သောနှစ် အတော်များများကပင် အခမ်းအနားများကျင်းပရာတွင် ပလပ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်ရေးအတွက် ဟိုတယ်များကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့ကြားရှိ အဆက်အသွယ်များအား ခိုင်မာအားကောင်းစေခြင်း
မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနသည် Helmsley ပရဟိတအဖွဲ့၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့ကြား ရှိနေသည့် ဆက်သွယ်မှုများ အထူးသဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုင်ရာ အခွင်
နိုဝင်ဘာ 24, 2017 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
စက်တင်ဘာ 28, 2017 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB Welcomes Launch of Burmese Version of the IFC Performance Standards
ဧပြီ 28, 2017 in ရင်းမြစ်များ
Vicky Bowman spoke on 27 April in Novotel Yangon at the launch of the Burmese translation of the Performance Standards on Environmental and Social Sustainability of the International Finance Corporation (IFC) of the World Bank Group.
အောက်တိုဘာ 13, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
စက်တင်ဘာ 30, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
သြဂုတ် 25, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ကမ်းလွန်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းများအတွက် ထိရောက်သော ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက် လုပ်ငန်းစဉ် တည်ဆောက်ခြင်း
ဇူလိုင် 17, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) မှ ဦးဆောင်ပြီး ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ က နေ့ပြည်တော်တွင် ကျင်းပသောအစည်းအဝေး တွင် အစိုးရနှင့်အတူ ရေနံနှင့်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကုမွှဏီများ အတူတကွလက်တွဲပြီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကာလ၏ ရေနံတွင်းတူးခြင်း လုပ်ငန်းများအပါအဝင် ရှေ့ဆ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်သည် ငပလီဒေသ အရှည်တည်တံ့သည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အတွက် အဓိကအရေးပါသည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်
မေ 19, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
Hanns Seidal Foundation (HSF) နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမူရှိရေးအထောက်အကူ ပြုဌာန (MCRB) တို့ပူးပေါင်း၍ ပထမဆုံးအကြိမ် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သူများ ပါဝင်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်အား 2016 မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ င
သုတေသနအရ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက် (EIA)ထုတ်ပြန်ကြေညာမှု မပြည့်စုံသည်ကို တွေ့ရှိရ
ဧပြီ 04, 2016 in ရင်းမြစ်များ
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) က ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက် (EIA)နှင့် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာဆန်းစစ်ချက် (IEE) ထုတ်ပြန်ကြေညာမှု မည်မျှရှိသည်ကို လေ့လာထားသော စစ်တမ်းတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Local voices still need to be heard in Wan Hsala village, Shan State
မတ် 22, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
Hnin Wut Yee, Research and Outreach Manager at MCRB has writtenablog on the impacts ofaSalween/Thanlwin dam project at Tasang on local women in Wan Sala village.
On 24 February 2016, MCRB and PACT MPE (Mekong Partnership for Environment) co-organisedadiscussion in Yangon of public participation in EIA with the objectives of sharing experience which could be used to guide development of regional guidelines on pub
Myanmar Emissions Guidelines
ဖေဖော်ဝါရီ 01, 2016 in ရင်းမြစ်များ
The first set of Myanmar National Environmental Quality Guidelines to regulate emissions inanumber of sectors were released on 29 December 2015.
The Myanmar Ministry of Environmental Conservation and Forestry (MOECAF) has adopted its long-awaited Environmental Impact Assessment Procedures which have been put together with the help of the Asian Development Bank.
ဇန်နဝါရီ 25, 2016 in ရင်းမြစ်များ
The Myanmar Environmental Impact Assessment Procedures (MOECAF Notification 616 of 29 December 2015) are available in Burmese, with an unofficial English translation of the Procedures and Annex 1 in English.
မတ် 17, 2015 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ဖေဖော်ဝါရီ 25, 2014 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
The Private Sector’s Experience and Expectations of Environmental and Social Safeguards
ဖေဖော်ဝါရီ 11, 2014 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
On February 10th 2014, Vicky Bowman gaveapresentation (English/Myanmar) on ‘The Private Sector’s Experience and Expectations of Environmental and Social Safeguards’ to an ADB-sponsored National Seminar on Myanmar’s Country Safeguards System, Naypyidaw